တစ်ဦးကဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ privacy နဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အဆုံးစွန်ပေးထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘေလီဇ်ကုမ္ပဏီအတွက်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းရွေးချယ်စရာများစွာလည်းရှိပါတယ်။ သငျသညျကမ်းလွန်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထည့်သွင်းရန်ရှာကြသည်ဆိုပါကမှတ်ပုံတင်သင့်ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်. တစ်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြစ်နိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏။ သူတို့ရဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူတတ်နိုင်, အမြန်နှုန်းနှင့် privacy နှစ်ဦးစလုံးကိုရှာဖွေလိုကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များအတွက်, ဘေလီဇ်ထိုအထဲဆွဲသွင်းပါဝင်လိုဆန္ဒများအပေါငျးတို့သဖြည့်ဆည်းဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ဘေလီဇ်, သင်အနည်းငယ်မျှသာ start-up အခကြေးငွေနှင့်တန်ဖိုးနည်းနှစ်စဉ်ကြေးပေးဆောင်ခြင်း, တူညီတဲ့နေ့၌ထည့်သွင်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ များစွာသောအခြားတရားစီရင်မှုနှင့်မတူဘဲကဖွဲ့စည်းနိုင်မီကုမ္ပဏီ၏အမြတ်ထုတ်ရန်သောင်းချီဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏လိုအပ်နိုင်ပါသည်, ဘေလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီအမြတ်ထုတ်ရန်မဆိုလိုအပ်ချက်မရှိ။
သင့်ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်း (ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ) တစ်ဦးတည်းသာဒါရိုက်တာနှင့်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်များကိုလိုအပ်နေပါသည်။ ဤလူဖြစ်စေတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်နိုင်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်စေနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများဖိုင်, သင်ဘေလီဇ်တစ်ခရီးစဉ်အောင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ စာရွက်စာတမ်းများသင်တို့အဘို့တင်သွင်းပြီးနောက်သင်ဖို့ပို့သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်သင်တို့ဆီသို့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ဘေလီဇ်, နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) 1990 ၏အက်ဥပဒေနှင့်အညီ, ရှိသမျှကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ဦးစလုံးတံဆိပ်ခေါင်းခွန်ငွေပေးချေမှုအဖြစ်ကုမ္ပဏီရရှိမဆိုင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဘေလီဇ်လည်းအကျိုးစီးပွား, ငှား, အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson, လျော်ကြေး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဘေလီဇ် IBC မှတစ်ဦးစရိတ်ဖြစ်အံ့သောငှါအရာအားလုံးထက်အပေါ်အခွန်ကောက်ခံမှုနှိမ်မထားဘူး။
ဘေလီဇ်လျှို့ဝှက်၏သိသာထင်ရှားသောအဆင့်နှင့်အတူ၎င်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များအမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ပြီး, ဤအရွေးချယ်သောလူများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ပုဂ္ဂလိကနေဆဲဖြစ်သည်။
ဘေလီဇ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏မြင့်မားသောအဆင့်ပေးထားပါတယ်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်, ကော်ပိုရေးရှင်းမဆိုနိုင်ငံ၏တရားရုံးများအားဖြင့်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုသိမ်းယူခြင်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ဒိုင်းလွှားကိုပေး။
တစ်ဦးဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းတည်ထောင်ရန်, လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်ရန်လွယ်ကူသည်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းကိုသာကုမ္ပဏီ၏စာချွန်လွှာနှင့်ဖွဲ့စည်းဆောင်းပါးများအပြင်ထိုမှတ်ပုံတင်ထားအေးဂျင့်များ၏အမည်နှင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏လိပ်စာပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။
သင့်ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီနှင့်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များပြောင်းလဲမှုများ၏အမည်များတွေ့ကြုံလျှင်လည်း, သင်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူဤအချက်အလက် file မှမလိုအပ်ပါ။
ပထမဦးစွာသင်ဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်အနေနဲ့ကမ်းလွန် service provider ကအသုံးချရမည်ဖြစ်သည်။ ဘေလီဇ်ထည့်သွင်းဖို့ဘေလီဇ်သွားရောက်မယ့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမလိုအပ်ပါဘူးကတည်းကတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုမှတ်ပုံတင်ထိရောက်လွယ်ကူအောင်, အွန်လိုင်းပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းထဲမှာပုံစံများကိုမေးလ်သို့မဟုတ်သင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်သူတို့ကိုဖက်စ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ပုံစံများကိုပြီးစီးပြီးနောက်သင်၏မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်မှပြန်လည်ပေးအပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လာမယ့်ခြေလှမ်းလိပ်စာသူသို့မဟုတ်သူမ၏အထောက်အထားနဲ့တွဲပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုပိုင်ရှင်၏အသိအမှတ်ပြုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူရရှိရန်သငျသညျလိုအပ်သည်။ တဦးတည်းရဲ့လိပ်စာဟာလူနေအိမ် utility ကိုဥပဒေကြမ်း၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့မူရင်းမိတ္တူပေးခွငျးအားဖွငျ့ရိုးရှင်းစွာပြီးစီးစေနိုင်သည်သက်သေပြဖို့တာဝန်အစည်းအဝေး။
ဘေလီဇ်အတွက်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လျှောက်ထား, သင်မှတ်ပုံတင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်သင့်ရဲ့အေးဂျင့်မှအခကြေးငွေသင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုအောင်ရပါမည်။ ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိပုံစံများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက်ဖုန်းခေါ်နံပါတ်များကိုရှိပါတယ်။
လိုအပ်သောငွေပေးချေပြီးနောက်လိုအပ်သောပုံစံများကိုတင်သွင်းနေကြသည်ကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်, ထိုကြောင့်လုံ့လဝီရိယနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများပြီးစီးကြသည်, ထိုအေးဂျင့်ကိုသင်တရားဝင်ဘေလီဇ်အတွက်ထည့်သွင်းဖို့တင်သွင်းဖို့လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများပြီးအောင်သင်နှင့်သင့်အဆိုပြုထားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပြီးစီးခဲ့သောပထမဦးဆုံးစာရွက်စာတမ်းများသင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီအတွက်အစည်းအရုံး၏စာချွန်လွှာများနှင့်ဆောင်းပါးများဖြစ်ကြသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများနှစ်ယောက်စလုံးပေးသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့အေးဂျင့်အားဖြင့်အထဲကပြည့်ရကြ၏, ပြီးတော့သူတို့လုပ်ငန်းစဉ်၏ဤအပိုငျးဖြည့်စွက်ရန်မှတ်ပုံတင်များအတွက်လိုအပ်သောအခကြေးငွေနှင့်အတူဘေလီဇ်အတွက်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ၏ Registry ကိုမှသူတို့ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဘေလီဇ်အတွက်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ၏ Registry ကိုသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများ၏ပုံစံတင်ပို့ရန်ပြီးသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သူတို့ကတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်သင့်လုပ်ငန်းကြေညာ, သင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သင့်ရဲ့လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, တစ်ဦးဘေလီဇ်ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ကြေးတင်သွင်းဖို့သတိရပါရမည်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားငွေပေးချေမှုကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်မှတဆင့်လုပ်နေကြသည်။
ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်က၎င်း၏ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးကိုသင့်ရဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ၏မိနစ်စာရွက်စာတမ်းများစေမည်။ သစ်ကိုဒါရိုက်တာ (များ) ကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ / သူ / သူမ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ရှယ်ယာရှင် (s) ကိုဝေစုလက်မှတ်များခံယူသောဖေါ်ပြခြင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအောက်ပါ။
အဆိုပါအေးဂျင့်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ပိုင်ရှင်များမှပါဝါသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အရာရှေ့နေချုပ်တစ်ဦးကို Power အပြီးသတ်, အဲဒီနောက်အေးဂျင့်နှုတ်ထွက်စာ၏စာတစ်စောင်တင်ပြ။ အဆိုပါအေးဂျင့်ကိုလည်းကုမ္ပဏီသစ်ရှယ်ယာရှင်များသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီမှထုတ် လုပ်. Trust ၏တစ်ဦးကြေညာစာတမ်း, ပြီးဆုံး။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘေလီဇ်ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်ဆိုင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ခြေလှမ်းများ၏အားလုံးအတိုင်းလိုက်နာနှင့်သင့်အေးဂျင့်နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်အဖြစ်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘေလီဇ်တစ်နည်းပညာအဆင့်မြင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ Registry ကိုရတာဟာကတည်းကသူတို့အလွယ်ကူဆုံးတွေထဲကပူဇော်နှင့်အမြန်ဆုံး ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ရှင်ရွေးနိုင်သည်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ခွင့်အလမ်းများကို။ အဆိုပါဘေလီဇ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ၏များစွာသောအားသာချက်များကိုအပြင်၌, တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအပေါငျးတို့သဖြည့်စွက်ဖို့ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အဆင်ပြေဖြစ်စဉ်ကို လုပ်. , ဘေလီဇ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်စံပြတည်နေရာအောင်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံစံတင်ပို့ရန်အခကြေးငွေရှိပါတယ်သိရသည်။